Yakakwira Frequency Induction Simbi Waya Inopisa Muchina
musha / Applications / Induction Heating / Induction Simbi Wire Inopisa
Category: Induction Heating Tags: tenga induction inopisa heater, induction kupisa kupisa, kudzivirirwa kunonoka, induction inopisa kupisa, induction tempering maitiro, kuderedzwa kunotyisa pasi, simbi waya tempering, pamusoro tempering, pamusoro tempering hita, kuzvidzora, tempering induction michina, tempering maitiro, waya tempering induction
Induction Simbi Waya Tempering Procee Kunyorera
Induction tempering inzira yekupisa inogadzirisa michina zvimiro senge kuomarara uye ductility mumabasa ekushandira akatomarara.
Isu tinovimbisa mhando yepamusoro, kukurumidza kutendeuka, basa rakanakisa revatengi, uye mitengo yemakwikwi.
HLQ ndiye mutungamiri mune induction kupisa kurapa indasitiri ichipa akasiyana siyana ekurapa kupisa services, kusanganisira induction tempering, muChina. Induction tempering ndiko kupisa kunorapa maitiro anowanzoitwa mushure meiyo induction yekuomesa maitiro apedza. Inoitwa pane yakaderera tembiricha pane iyo yekumisikidza kuomesa maitiro kuitira kuti usvike kune waunoda kuomarara renji kana kuwedzera kuomarara kuchikamu nekuwedzera ductility. Induction tempering yesimbi kazhinji inoitwa neyepasi-mafrifiti kuburitsa mhedzisiro mumasekondi akafanana neanopisa tembiricha maficha ayo anowanzo kutora maawa.
Induction kudziyisa kunoshanda kune inoenderera tempering maitiro mune iyo waya stock inodyiswa kuburikidza ne induction coil pakumhanyisa kumhanya.
Material: Simbi waya 3mm kusvika 12mm dhayamita
Kutya: 1922 ºF (1050 ºC)
Induction Kuchenesa Midziyo: DW-UHF-60 kW, 100 kHz induction heat system, Yakagadzirirwa nebasa remusoro riri kure rine zvisere 1.0 μF ma capacitor eiyo yakazara ye2 μF
- Matatu ekupinza ekudziya akagadzirwa uye akagadzirirwa chaizvo kuti ichi chikumbiro chifukidze huwandu hwetambo
Induction Inopisa Maitiro:
Wire stock inodyiswa kuburikidza ne makumi mana-tendeuka helical coil pachiyero chemamita matanhatu / miniti, inosvika tembiricha inodikanwa kuti ikonzere kupisa kwacho. Iyo yakafanana 6 tendeuka helical coil inoshandiswa kune yakakura waya dhayamita
inoda kugadziriswa kwe6 stock feed-mitsara muvira rine gasi nekuodza mwoyo kupisa kuchinjisa mumatare ediki madhaimendi. Induction inoda 50% kushoma simba uye inoderedza yekugadzira-mutsara tsoka ne90%
- kudziya yakanangana netambo, kuchengetedza simba uye nguva
- Nyore kusanganisa mukugadzira mutsetse, kuvandudza throughput
- kunyatso kudzora kupisa
- kunyangwe kugoverwa kwekupisa mukati me waya
Induction tempering inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemotokari kutsamwisa nzvimbo dzakaomeswa senge shafts, mabara uye majoini. Maitiro acho anoshandiswawo muhubhu uye pombi indasitiri kutsamwa kuburikidza-akaomarara workpieces. Induction tempering dzimwe nguva inoitwa mune inoremedza chiteshi, dzimwe nguva mune imwe kana akati wandei akapatsanuka hasha zviteshi.
Nei uchishandisa induction tempering?
Yedu induction tempering maitiro inogadzira mhedzisiro nekukurumidza. Kuchenesa kwesimbi dzakaomarara ibasa renguva uye tembiricha. Induction kutsamwa Induction tempering inogona kuitwa pane ese akaomarara zvinhu. Mhedzisiro yacho chikamu pamwe nekuwedzera kuomarara, ductility uye simba rekukanganisa.
Mukana mukuru we kudzivirirwa kunonoka kumhanya. Induction inogona kutsamwisa workpieces mumaminitsi, dzimwe nguva kunyange masekondi. Vira remoto kazhinji rinotora maawa. Uye, sezvo induction tempering yakakwana kune inline kusangana, inoderedza huwandu hwezvinhu zviri muchiitiko ichi. Induction tempering inobatsira kudzora kwemhando yega yega yekushandira. Yakabatanidzwa induction hashi zviteshi zvakare inochengetedza yakakosha pasi nzvimbo.